Arsene Wenger Oo Laba Kooxood Kusoo Koobay Liiska Kooxaha Xiga Ee Uu Tababari Doono & Tababarayasha Kooxahaas Oo Haatan Dhibaataysan. – GOOL24.NET
Tababarihii hore ee kooxda Arsenal ee Arsene Wenger ayaa la filayaa inuu kaliya laba kooxood kusoo koobay liiska kooxaha xiga ee uu tababaraha u noqon karo marka uu kusoo laabto saaxada tababarenimo ee kubadda cagta.
Wenger ayaa 22 sano kasoo talinayay kooxda Arsenal waxaana uu ugu dambayn shaqadaas iska casilay dhammaadkii xilli ciyaareedkii hore, Tababaraha ayaa hore loo filayay inuu iskaga hawl gabo kubadda cagta balse dhawaan ayuu si rasmi ah u shaaciyay inuu kusoo laaban doono garoomada 1-da bisha January.
Haddaba, Wargeyska ree France ee Le Parisien ayaa daaha ka qaaday in Wenger uu doonayo inuu tababaro midkood kooxaha Real Madrid iyo Bayern Munich oo labaduba haatan ku jira xaalado aan fiicnayn.
Julien Lopetegui iyo Niko Kovac ayaa labaduba guul la’aan ah 4-tii kulan ee ugu dambeeyay waxaana uu durtaba culays weyni saaranyahay waxaaana suurogal ah inay shaqooyinkooda lumin karaan toddobaadyada soo socda.
Sidoo kale kooxda dalkiisa ee Paris Saint-Germain ayaa doonaysa inay 68 jirkan u magacaabaan agaasimaha ciyaaraha ee kooxdooda, si lamid ah xiiso badan oo uga imanaya kooxaha horyaalada China iyo Japan.
Si kastaba ha ahaatee, Arsene Wenger ayaa la filayaa inuu ka faa’idaysan doono tababarayaal badan oo haatan ku dhibaataysan kooxahooda isla markaana uu si deg deg ah u heli doono jago tababare oo heer sarre ah.